Itoobiya oo lagu eedeeyay inay fayras ku weerartay mucaaradkeeda - Worldnews.com
Ololahan weerarka fayraska ee dowladda, ayaa lagu beegsanayaa dadka u
Rabshado ka soo cusboonaaday Bariga Itoobiya
Ugu yaraan labo qof ayaa ku dhintay in ka badan lix boqolna way ku barakaceen dibadbaxyo cusub oo ka bilowday Bariga Itoobiya. Wararka halkaasi laga helayo ayaa sheegaya in...
'Halis soo wajahday' qaxootiga Itoobiya ee Geeska Afrika
Dowladda Itoobiya ayaa lagu eedeynayaa in ay fuliso howlgallo lagu qafaalanayo dadka u dhashay dalkaas ee qaxootiga ku ah dalalka deriska la ah ee Bariga Afrika. Hay'adda u...
Maxaa Itoobiya loogu soo rogay xaalad degdeg ah?
Itoobiya, oo ah dalka labaad ee uggu dadka badan qaaradda Afrika, dhaqaalihiisuna waa yadan danbe si xoog leh u soo kobcayey, ayaa gilgishay toddobaadkii lasoo dhaafey....
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa sheegtay in dadka sababo ganacsi oo u gaar ah ugu safaya dalka Turkiga lagu boorrinayo inay aad u digtoonaadaan. Waxay...
Xafiiska xuquuqda aadanaha ee Qaramada midoobay ayaa sheegay in ciidamada dalka Myanmar oo sidoo kale loo yaqaanno Burma ay dambiyo ka dhan ah aadanaha kula kaceen...
Hay'adda xuquuqda aadanaha Itoobiya: "669 ruux ayaa la dilay"
Hay'adda xuquuqda aadanaha Itoobiya ee EHRC oo dawladda hoostagta ayaa baarlamaanka u sheegtay in la dilay 669 ruux intii ay socdeen dibadbaxyadii dawladda lagaga soo...
Hay\_'adda xuquuqda aadanaha Itoobiya: "669 ruux ayaa la dilay"
Hay'adda xuquuqda aadanaha Itoobiya ee EHRC oo dawladda hoostagta ayaa baarlamaanka u sheegtay in la dilay 669 ruux intii ay socdeen dibadbaxyadii dawladda lagaga soo horjeeday ee billawday bishii Nofembar ee 2015kii. Mucaaradka iyo qolyaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa sheegay in dadka dhintay ay aad uga badan yihiin tiradaas waxayna ku baaqeen baaritaan madaxbannaan la...
Addis Ababa ─ Xukuumadda Itoobiya ayaa maanta xabsiga kasii daysay hoggaamiyaha mucaaradka dalkaas, Merera Gudina oo muddo ka badan hal sano ku jiray xabsi ku yaalla Addis Ababa. Saraakiisha xabsiga uu ku xidhnaa hoggaamiyahan ayaa sheegay in Gudina la sii dayay maanta oo Arbaco ah, isla markaana loo ogolaaday inuu hoygiisii dib ugu laabto. Isagoo ahaa hoggaamiyihii kooxda...
Mudaaharaadyada ayaa ka sii socda dalka Itoobiya boqolaal dad ah ayaana isugu soo baxay wadooyinka magaalada waqooyiga ku taalla ee Gondar iyaga oo dawladda dhaliishan. Waxay qaadayaan halkudhagyo ay dawladda kaga soo hor jeedaan. Mar ayayna isku gadaameen dhismaha maxkamadda ugu wayn magaaladaas. Waxaa jira warar sheegaya in booliiska iyo mudaaharaadayaashu ay isku dhaceen dad...
Abiy Axmed oo dhaliilay Hab-dhaqanka Hay\_'adaha amniga Itoobiya
ADDIS ABABA - Isagoo ka jawaabayey Su'aallo ay waydiiyeen Xildhibaanada Baarlamaanka Itoobiya, Ra'iisu Wasaare Abiy Axmed ayaa dhaleecayn culus uu u jeediyay hay'addaha amaanka dalkiisa, oo uu ku dhaliilay qaabyo ay ula dhaqmaan maxaabiistan. Abiy ayaa ku eedeeyay Ciidamada inay fulinayaan ficillo argagaxiso iyagoo si qaldan u xira dadka sidoo kalena ku jirdilla xabsiyada,...
Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bini`aadamka ee ku sugan dalka Hindiya ayaa walaac ka muujiyay wararka sheegaya in xukuumadda Delhi ay dooneyso inay dalkeeda ka musaafuriso kumannaan qaxootiga Muslimiinta Rohingya. Hay`adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in qaxootigu ay la kulmeen tacaddi markii ay ku laabteen...